တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick အား ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ် တက်ရောက်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Col. Nigel Goodwin တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မ တော်အနေဖြင့် တိုင်းပြည်ကအားထားရပြီး ပြည်သူလူထုက ယုံကြည်အားကိုးရသည့် တပ်မတော်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကဏ္ဍ အသီးသီးတွင် တပ်မတော်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများအား အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တာဝနျပွီးဆုံး၍ ပွနျလညျထှကျခှာမညျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗွိတိနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Andrew Patrick အား ယနနေ့လေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျ တကျရောကျပွီး ဗွိတိနျနိုငျငံသံ အမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Col. Nigel Goodwin တို့ တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ တပျမ တျောအနဖွေငျ့ တိုငျးပွညျကအားထားရပွီး ပွညျသူလူထုက ယုံကွညျအားကိုးရသညျ့ တပျမတျောဖွဈအောငျ ဆောငျရှကျနသေညျ့ အခွအေနမြေား၊ နိုငျငံတျောအစိုးရနှငျ့ နိုငျငံရေးပွုပွငျပွောငျးလဲမှုကဏ်ဍ အသီးသီးတှငျ တပျမတျောမှ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေုမြားအား အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗွိတိနျနိုငျငံသံအမတျကွီးအား အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျခဲ့သညျ။
နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူအတွက် အသက်ကို ပဓာနမထား၊ စွန့်လွှတ်စွန့်စားစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသူများအား တပ်မတော်စွမ်းရည်သတ္တိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်နှင့် လက်မှတ်များချီးမြှင့်အပ်နှင်း(ရုပ်သံသတင်း)